सरकारले घरमा छोरी हुने परिवारलाई निशुल्क दिने भयो यस्तो सुविधा ! यस्ताे कारण? – Sandesh Press
May 31, 2021 493
घरमा छोरी हुने परिवारलाई नेपाल सरकारले निशुल्क दिने भयो अब यस्तो सुविधा ! काठमाडौ । प्रदेश नं २ सरकारको ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानअन्तर्गत बीमा गराएका २७ हजार छोरीको घरमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा जडान गर्ने तयारी थालिएको छ ।
See हुनेकी नहुने भने विषयमा यकाबिहानै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड बाट आयो यस्तो खबर?
सामाजिक दुरी कायम गरेर वा अनलाइनबाट भएपनि माध्यामिक शिक्षा परीक्षा एसईई सञ्चालन गर्ने तयारी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गरेको छ । यसका लागि वैकल्पिक भनिएको अनलाइन वा सामाजिक दुरी कायम गरेर भएपनि परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा बोर्ड पुगेको छ ।
यद्यपी यसका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको निर्णय आउन बाँकी छ ।
कोभिड १९ महामारीका कारण भौतिक उपस्थितीमा बोर्डले तयार पारेका प्रश्नपत्र र कापी बाँडेर परीक्षा गर्ने सम्भावना कम हुँदै गएका बेला विद्यालयबाटै परीक्षा सञ्चालन गरेर मात्रै नतिजा निकाल्ने तयारी अघि बढेको हो ।
सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका–४ पटौनाका उनबहादुर कार्कीका कान्छा छोरा रुद्रबहादुर (विष्णु) को बिहे धुमधामका साथ हुँदै थियो। आमा हीराकुमारी खुशीले गद्गद् हुँदै बुहारी भित्र्याउन साँझको चाँजोपाँजोमा गर्दै थिईने तर बेहुलीको घर सिन्धुलीस्थित छोराको कारण सन्नाटा छाउँदै थियो।”
Prevको’रोना वि’रुद्द खटिएकि नर्स जसले बच्चालाई ज’न्म दिएर सधैका लागि बि’दा भइन !
Nextलगनगाँठो कसेर सिन्दूर पोतेपछि बिहे अन्तिम सङ्कल्प गर्ने बेला बिहुलाले एक्कासि ‘ल तेरी छोरी लान्न’ भनेपछि…
किन हुन्छ महिनावारी गडबढि ?
अस्पतालबाट रुदै मृगौला सहयोग मागेकी चम्सुरि साउनमा यसरी हरियो चुरामा सजिइन ,नाचिन छमछम, हेर्नुस्